Budata Offroad Bus Mountain Simulator APK maka Android
Budata Offroad Bus Mountain Simulator
Free Budata maka Android (47.00 MB)
Budata Offroad Bus Mountain Simulator,
Offside Bus Mountain Simulator, nke dị nụdị ụgbọ ala na ụgbọ ala nelu ikpo okwu mkpanaka, yiri egwuregwu ịme anwansị.
Ụzọ ugwu dị egwu na -eche anyị na Offroad Bus Mountain Simulator, nke NormanD mepụtara wee nye ndị egwuregwu ikpo okwu mkpanaka nefu. Oge juru eju na-echere anyị negwuregwu ebe anyị ga-eji bọs dị iche iche nokporo ụzọ mpụga. Ndị na -egwu egwuregwu ga -enwe ike ịnya ụgbọ ala, zụlite ma gbanwee ụgbọ ala ha chọrọ. Ụgbọ ala ndị dịpụrụ adịpụ, nke yiri ụgbọ ala ndị America, na -ewepụta ọmarịcha ihe dị oke mma.
Nime egwuregwu a, nke nwere eserese mara mma ma dị egwu, anyị ga -eji pedal breeki gas na enyo nke ama anyị. Ndị na -egwu egwuregwu ga -enwe ramp, mkpọda, na ụzọ kwụ ọtọ maka ọtụtụ kilomita nokporo ụzọ dị na mpụga obodo. Nime egwuregwu ebe anyị ga -ahụ oge dị iche iche, anyị ga -anwa ịchịkwa bọs nugwu snow.
Offside Bus Mountain Simulator, nke nwere ike kpọọ 100 puku ndị na -eme egwuregwu na Google Play, nwetara mmelite ikpeazụ ya na Ọktọba 22, 2018. Ndị na -egwu ekwentị chọrọ nwere ike ibudata egwuregwu ahụ na Google Play. Mmepụta nwekwara akara nke 4.4.
Offroad Bus Mountain Simulator Ụdịdị